किन दिँदैछन् नेपालको गैँडा चिनलाई ? - Daraundi Gorkha's No. 1 Newspaper Daraundi Gorkha's No. 1 Newspaper
किन दिँदैछन् नेपालको गैँडा चिनलाई ?
Published On : ६ जेष्ठ २०७५, आईतवार १२:३१
भारतबाट उद्धारपछि सौराहामा ल्याएर पालनपोषण गरी राखिएको गैँडाको बच्चा ९केटो० लाई पनि ‘पिट बोमा’ ९सानो खोर० मा राखिएको छ ।
चीन पठाउनका लागि अन्य गैँडाको बच्चा राखिएको बोमा नजिकै अर्को बोमा बनाएर उसलाई पनि बोमामा राख्न शुरु गरिएको चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जका पूर्वी सेक्टर प्रमुख तथा सहायक संरक्षण अधिकृत अभिनय पाठकले जानकारी दिए ।
अघिल्लो वर्षको साउन २८ गते आएको बाढीले निकुञ्जबाट बगाएर केटोलाई भारत पु¥याएको थियो । गत चैत १० गते भारतबाट उद्धार गरी केटोलाई सौराहास्थित राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोषमा ल्याएर पालनपोषण गरिँदै आइएको छ ।
अन्य तीनवटा गैँडाको बच्चालाई हालैमात्रै निकुञ्जबाट नियन्त्रणमा लिई बानी पार्न पिट बोमामा राखिएको छ। सोही नजिक अर्को बोमा तयार गरी भारतबाट उद्धार गरिएको केटोलाई समेत राख्न थालिएको पाठकले जानकारी दिए ।
राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोष, सौराहाका निमित्त कार्यालय प्रमुख रामकुमार अर्याल केटो तन्दुरुस्त रहेको बताए। उनले भने, ‘निकुञ्जबाट हालै ल्याइएका अन्य गैँडासमेत तन्दुरुस्त छन् । सबै खानेकुरा सजिलै खान थालेका छन् ।’ रासस